ေျမြေတြကို အိမ္မက္ မက္ရင္ ေကာက္ရမယ့္ နမိတ္မ်ား – Shwe Yaung Lan
HomeKnowledgeေျမြေတြကို အိမ္မက္ မက္ရင္ ေကာက္ရမယ့္ နမိတ္မ်ား
မြွေတွေကို အိမ်မက်မက်ရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲ? သင့်အိမ်မက်ထဲမှာ မြွေကို မြင်တွေ့ရရင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ကံကြမ္မာက….
အိပ်မက်မက်တယ်ဆိုတာ ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေက သင်မကြာခင်မှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် ကံကြမ္မာနဲ့ဆက်စပ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေကို မြင်တွေ့ရတဲ့အခါ မကြာခင် သင်ကြုံတွေ့ရမယ့် ကံကြမ္မာက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) မြွေက သူ့ရဲ့လျှာကိုထုတ်နေတာကို မြင်ရရင်
သင်ဟာ လက်ရှိဘဝထဲမှာ ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ သင်ကြောက်ရွံ့တဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရနိုင်ချေရှိပြီး အဲ့ဒါတွေကို ကောင်းကောင်းဖြေရှင်းဖို့ သတ္တိတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။
(၂) မြွေတွေ အများအပြားတွေ့ရတယ်ဆိုရင်
အပြင်မှာ မြွေတွေအများကြီးကို တစ်နေရာတည်းမှာ တွေ့ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာ တွေ့လိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း သင်အရမ်းကို လန့်သွားမှာပါ။
အဲ့ဒီလို အိပ်မက်မက်တာကတော့ သင်က အလုပ်တွေကို မနားမနေကြိုးစားပြီးလုပ်နေတာကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်လာတော့မယ့် အဓိပ္ပါယ်ပါ။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရမှာပါ။
(၃) မြွေမြိုခံရတယ် ဒါမှမဟုတ် မြွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်သွားတယ်လို့ မက်တယ်ဆိုရင်တော့
ဒီလိုမက်ရင်တော့ သင့်ဆီကံကောင်းခြင်းတွေ ရောက်လာတော့မှာပါ။ နေမကောင်းဖြစ်နေသမျှတွေ ပျောက်သွားနိုင်ပြီး တခြားကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
(၄) မြွေကိုသတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ မက်တယ်ဆိုရင်
များသောအားဖြင့် အိပ်မက်ထဲမှာ ကိုယ့်ဘက်က ဘာမှမလုပ်လိုက်ရခင်မှာ အိပ်မက်က နိုးသွားတာကများပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က မြွေကို သတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ အိပ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံက ကောင်းလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
(၅) မြွေကိုက်ခံရတယ်လို့ အိပ်မက်မက်ရင်တော့
မြွေကိုက်ခံရတယ်လို့ အိပ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့ ကြံစည်နေတာဖြစ်နိုင်လို့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြွေက သင့်ရဲ့ ရင်ဘတ်နားတဝိုက်ကို ကိုက်သွားတယ်လို့ မက်ရင်တော့ သင်ဟာ အချစ်သစ်နဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(၆) ခြုံထဲမှာပုန်းနေတဲ့မြွေကို မြင်လိုက်တယ်လို့ မက်ရင်တော့
ဒီလိုမက်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အတွင်းစိတ်အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့နိုင်ချေရှိပြီး သူတို့တွေရဲ့ မကောင်းကြံခြင်းကိုလည်း ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
(၇) မြွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့
သင့်ရဲ့အချစ်ရေးက ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ရမယ့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီး သင့်ချစ်သူက သစ္စဖောက်တာကို ခံရနိုင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကို သေချာစောင့်ကြည့်ပြီး သင့်စိတ်ကိုလည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။